काठमाडौं । पत्रकार शालिकराम पुडासैनी आत्महत्या प्रकरणमा प्रहरी हिरासतमा रहेका टेलिभिजनकर्मी रवि लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलको जाहेरी दर्ता गर्न प्रहरीले अस्वीकार गरेको छ । प्रहरी अनुसन्धानमा रहेको शालिकरामको आत्महत्यासम्बन्धी भिडियो किर्ते..
एजेन्सी । रुसी राजधानी मस्को नजिकको एक विमानस्थलबाट बिहीबार उडेको यात्रुबाहक विमान मकै बारीमा आकस्मिक अवतरण गरेको छ । यात्रु र चालक दलका सदस्य गरी दुई सय ३० भन्दा बढी व्यक्ति..
काठमाडौं । कानुनी रूपमा अमेरिका बस्दै आएका आप्रवासीहरूको भिसा अवधि बढाउन र स्थायी नागरिकता अर्थात् ग्रिन कार्ड पाउने प्रक्रियालाई ट्रम्प प्रशासनले अझै कठोर बनाउने भएको छ । अमेरिकी सरकारले आप्रवासनसँग सम्बन्धित..
त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जको मनमोहन कार्डियो भास्कुलर भवनमा आगलागी
काठमाडौं । त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज परिसरमा रहेको मनमोहन कार्डियो भास्कुलर डिजिज तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरको भवनमा आगलागी भएको छ । विद्युत सर्ट भएर सो भवनको माथिल्लो तलामा आगलागी भएको महानगरीय प्रहरी..
काठमाडौँ । उदयपुर घर भएका एक पूर्व सरकारी कर्मचारीले अख्तियार प्रमुखलाई ‘दुई सय वर्ष बाच्नू’ भन्दै सुसाइड नोट लेखेर आत्महत्या गरेका छन् । मालपोत कार्यालय कलंकीमा कार्यरत रहेका बेला भ्रष्टाचार मुद्दा..
काठमाडौं । मुलुकी अपराध संहिताले बहुविवाहलाई दण्डनीय मानेको छ । दोस्रो विहे गरे बदर हुने कानूनी व्यवस्था छ । तर आइतबार संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसद विजय..
काठमाडौं न्युरोडमा लुटिइन् सांसद भावना सुवेदी
काठमाडौं । व्यक्तिगत कामको सिलसिलामा न्युरोड पुगेकी प्रदेश नं ३ की प्रदेशसभा सांसद भावना सुवेदीको पर्स लुटिएको छ। न्युरोडको भीडभाडमा अज्ञात व्यक्तिले आइतबार अपरान्ह ब्यागमा रहेको पर्स लुटेको सांसद सुवेदीले बताइन्।..
कति छ तपाईंको जग्गा ? हदबन्दीमा परेर जफत होला
काठमाडौं । सरकारले मुलुकभर उद्योग, प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्थान, कम्पनी, संस्था या व्यक्तिका नाममा गैरकानुनी रूपमा लुकाएर राखिएको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत गर्ने तयारी शुरू गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा..
चुनावमा चन्दा लिएकाले मूल्य बढ्दा केही बोल्न सकेनौं : मन्त्री यादव
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मात्रिका यादवले चुनावमा उद्योगीले चन्दा दिएका कारण छड र सिमेन्टको मूल्य बढाउँदा आफूहरु बोल्न नसकेको स्वीकार गरेका छन् । शुक्रबार नेपाल सिमेन्ट उद्योग संघले गरेको..
जग्गा प्लटिङमा कडाई, अब जग्गाको मूल्य सस्तो हुनसक्ने
काठमाडौं । अबदेखि जथाभावी हुने जग्गा प्लटिङ कानूनी रुपमा नै कडाई हुने भएको छ । संघीय संसद्बाट पारित भएको भू उपयोग सम्बन्धि ऐनले जग्गा प्लटिङमा कडाई गरेको हो । संसदबाट पास..
पठाओ विरुद्ध ट्याक्सी व्यवसायी, आवद्ध नहुन ‘ह्विप’
काठमाडौं । दुइपांग्रे सवारीबाट यातायात सेवा दिएरहेको पठाओले आजबाट ट्याक्सी सेवा सुरु गरेको छ। पठाओको ट्याक्सी सेवा सुरु भएसँगै ट्याक्सी व्यवसायी भने आक्रोसित भएका छन्। उपत्यका ट्याक्सी व्यवसायी तथा चालक सेवा..
हदभन्दा बढी जग्गा सरकारले खोस्ने, भूमिहीनलाई वितरण गर्ने
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले हदभन्दा बढी जग्गा सरकारीकरण गर्न सरकारलाई परमादेश दिएको छ । सरकारीकरण गर्नुपूर्व मुलुकभरका हदभन्दा बढी जग्गाको एकीकृत फाँटबारी लिन भनिएको छ । भूमिसम्बन्धी ऐनको पाँचौं सांशेधनअनुरुप हदभन्दा..
चेक बाउन्सको अभियोगमा पक्राउ डेभाजुका सञ्चालक १ करोड बुझाएर रिहा भएलगत्तै ३ करोड ठगीमा पक्राउ
काठमाडौं । राजधानीको दरबारमार्गस्थित क्लब डेजाभूका सञ्जालक मनोज श्रेष्ठ चेक बाउन्सको अभियोगमा पक्राउ परेर धरौटीमा रिहा भएलगत्तै पुनः पक्राउ परेका छन् । केही दिनअघि विमानस्थलबाट पक्राउ परेका श्रेष्ठ आज (बिहीबार) एक..
साइबर हमला गरेर उत्तर कोरियाले चोर्‍यो दुई खर्ब रुपैयाँ
एजेन्सी । उत्तर कोरियाले आफ्नो हतियार कार्यक्रमका लागि पुंजी संकलन गर्नका लागि साइबर हमला गरिरहेको संयुक्त राष्ट्रको एक रिपोर्टमा भनिएको छ । संयुक्त राष्ट्रको एक लिक भएको रिपोर्ट अनुसार उत्तर कोरियाले..
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले संयुक्तराज्य अमेरिकामा रहेको भेनेजुएला सरकारको सम्पूर्ण सम्पत्ति रोक्का राख्न सोमवार आदेश दिएका छन् । भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मदुरोको कार्यशैलीको विपक्षमा रहेका राष्ट्रपति ट्रम्पले भेनेजुएला..
अमेरिकामा २४ घण्टाको अन्तरालमा दुई ‘शुटआउट’, २९ जनाको मृत्यु
Posted on Aug 04 2019
काठमाडौं । अमेरिकामा दुई छुट्टाछुट्टै गोली चलेको घटनामा २९ जनाको मृत्यु भएको छ । टेक्सासको एक सपिङ मलमा भएको गोली चलेपछि एक अर्को समान प्रकृतिको घटनामा नौ जनाको मृत्यु भएको..
अमेरिका–चीन व्यापार युद्ध थप तनावपूर्ण बन्दै, आइफोन पनि महंगो हुने
एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले आगामी सेप्टेम्बर महिनाको १ तारिख देखि चीनबाट अमेरिका भित्रिने ३ खर्ब अमेरिकी डलर मूल्य बराबरका चिनीयाँ सामग्रीमा थप शुल्क लगाउने बताएका छन् । उनले आफ्नो..
क्लब डेजाभूका सञ्चालक श्रेष्ठ बैंकिङ कसूर तथा ठगी अभियोगमा पक्राउ
काठमाडौँ । दरबारमार्गस्थित क्लब डेजाभूका सञ्चालक मनोज श्रेष्ठलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । आइतबार राति हङकङबाट काठमाडौं आइपुगेका श्रेष्ठलाई त्रिभुवन विमानस्थलमा अध्यागमन विभागले पक्राउ गरी प्रहरीलाई बुझाएको हो । बैंकिङ कसूर..
हेग लगे त विश्वको हिरो हुन्थें तर यिनीहरूले भन्ने मात्रै हो लग्दैनन् प्रचण्ड
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कसैले नेदरल्याण्डको हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालतमा पुर्‍याए आफू विश्वको हिरो बन्ने बताएका छन्। सोमबार बिहान खुमलटारस्थित निवासमा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’..
मन्त्रीहरू फेरिँदै, गृह, रक्षा, ऊर्जा, परराष्ट्र र सञ्चारबाहेक सबै नयाँ
काठमाडौं । सरकार गठन भएको सत्र महिनापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको गृहकार्य अगाडि बढाउनुभएको छ । सरकारका मन्त्रीहरुको काम प्रभावकारी नभएको आलोचना र गुनासो बढेपछि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने..
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा पुरुषोत्तमप्रसाद खनाल नियुक्त
काठमाडौं । सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा पुरुषोत्तमप्रसाद खनाललाई नियुक्त गरेको छ। बिहीबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमार्फत् मन्त्रिपरिषदको बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले खनाललाई..
काठमाडौं । निर्माता छविराज ओझा र नायिक शिल्पा पोखरेलविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ । बहुविवाह सम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धानका लागि जिल्ला अदालत काठमाडौंले दुई जनालाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको हो..
यी नदीहरुमा छ आकश्मिक बाढीको सम्भावना, उच्च सतर्कता अपनाउन चेतावनी
काठमाडौँ । मनसुनी वर्षा पुनः सक्रिय भएकोले बुधबार मुलुकका अधिकांश स्थानमा भारी वर्षा भइरहेको छ । विभिन्न जिल्लामा बाढी पहिरो र डुबानको जोखिम बढेको छ । राष्ट्रिय आपतकालिन उद्धार केन्द्रले चुरे..
काठमाडौं । गुल्मीमा पहिरोमा पुरिएर ११ जनाको मृत्यु भएको छ भने ४ जना बेपत्ता भएका छन् । जिल्लाको सत्यबति गाउँपालिका २ वटा वडामा पहिरोले घर पुरिदा ११ जनाको मृत्यु भएको..
Posted on Jul 20 2019
काठमाडौं । कर्णाली नदी व्यवस्थापन कार्यलय बर्दियाका तीन इन्जिनियर १५ लाख घुससहित पक्राउ परेका छन् । इन्जिनियरत्रय कमल सिटौला, विश्वेश्वर प्रसाद शाह, हरी प्रसाद चौधरी र सवारी चालक टंक प्रसाद ओझालाई..
काठमाडौं । राष्ट्रिय युवा परिषद्ले तयार पारेको ‘राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन–२०७२’ को पहिलो संशोधनमा युवाको उमेर १८ देखि ३५ वर्षलार्ई राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि ४० वर्ष सम्मलाई युवा उमेर..
काठमाडौं । नेपाल सरकारले पर्यटनलाई विकासको मुख्य क्षेत्र मानेको छ। विदेशी मुद्रा आर्जनको भरपर्दो माध्यम पर्यटनलाई बनाउने प्रत्येक सरकारी घोषणामा रहेको हुन्छ। तर नेपालीहरुले नै घुम्नकै लागि भनेर अर्बौ नेपाली रुपैयाँ..
एजेन्सी । खाडी क्षेत्रमा अमेरिकी सेनाले एक इरानी ड्रोन खसाएको छ । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले होर्मुज जलडमरुमा प्रवेश गरिरहेको एक जहाजका लागि खतरा बनेको इरानी ड्रोनलाई खसाएको हो । केही..
काठमाडौं । न्याय परिषद्ले उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका २३४ न्यायाधीशको एकैपटक सरुवा गरेको छ। आज बसेको परिषद्को बैठकले ७८ जना उच्च अदालतका न्यायाधीश र १५६ जना जिल्ला न्यायाधीशको एकैपटक सरुवा..
बिल गेट्सलाई पछार्दै यी व्यक्ति बने संसारकै दोश्रो धनी, कति छ उनको सम्पत्ति ?
एजेन्सी । माइक्रोसफट कम्पनीका संस्थापक बिल गेट्सबाट विश्वको दोश्रो धनि ब्यक्तिको स्थान खोसिएको छ। लगातार ७ वर्ष सूचिको दोश्रो स्थानमा रहँदै आएका गेट्सलाई बर्नार्ड अर्नाल्डटले तेश्रो नम्बरमा पुर्‍याइदिएका हुन्। ब्लुमबर्ग बिलेनियर..
Results 1994: You are at page7of 67